CHII CHITSVA | la-manette.com
Yakanakisa Mitambo SeHalo 2022
January 17 2022 ndima Claude henrichon
Halo ndeimwe yevanonyanya kuzivikanwa munhu wekutanga kupfura. Iwo akatevedzana ane mishanu mitambo mikuru uye akati wandei spin-off mitambo, kusanganisira Halo Wars, Halo 3: ODST, uye Halo: Svika. Iyi nhevedzano inowanzo zivikanwa nekusimudzira iyo FPS genre uye inoonekwa nevakawanda se ... Verenga zvakawanda
January 14 2022 ndima Mathilde Grimard
Mattel163 ichangobva kuzivisa kuti pre-kunyoresa kwatanga yeSkip-Bo yemhuri kadhi mutambo paIOS uye Android. Mattel163's wechitatu kadhi mutambo panhare, Skip-Bo, kudzokorodza kwemutambo wekare. Yakagadzirwa makore makumi mashanu nematatu apfuura, muna 53, seyakapusa asi yakanyanya ... Verenga zvakawanda
January 8 2022 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Mumeseji yeruzivo ichangoburwa yakatumirwa kuvaridzi veSwitch, Nintendo akapa runyoro rwekurodha gumi neshanu kweEuropean eShop yaDecember 15. Mushure mekuuya kwechipiri mwedzi wapera, Mario Party Superstars iri kukwira kusvika panhamba yekutanga. Big Brain Academy: Brain vs. Brain, chitsva chaDecember, inokwanisa ... Verenga zvakawanda
Nekuda kukurumbira kukuru kweUndertale, vateveri vazhinji vakamirira neshungu Deltarune, iyo inotevera chirongwa kubva kumusiki Toby Fox. Varidzi veswitch vakawana kuravira kwemutambo nekuburitswa kweChitsauko 1 mahara muna Kukadzi 2019. Asi kubva ipapo, hapasati pave nekuvandudzwa kwakawanda. Kupemberera ... Verenga zvakawanda
Outright Games naHasbro vazivisa Shamwari Yangu Peppa Nguruve, mutambo mutsva wekunakidzwa wakavakirwa paEOne's preschool terevhizheni. Ichaburitswa paChinja muna Gumiguru 21. Heino ruzivo rwekutanga rwakapihwa neOutright Games, pamwe neyekutanga turera: Sehunhu hutsva munyika yePeppa Nguruve,… Verenga zvakawanda
Game Informer ichangobva kutaura nevagadziri veMario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey. Chinyorwa chakataura naYoshihiko Maekawa naAkira Otani, vagadziri veAlphaDream neNintendo zvakateerana (pakati pevamwe). Maekawa naOtani vakataura kuti sei yazvino 3DS remake isiri pa… Verenga zvakawanda
Iyo Etrian Odyssey yakatevedzana yaive yakakurumbira paDS, uye zvakatonyanya pa3DS. Pave paine akati wandei mapindiro, remakes, uye kunyange macrossovers ane Mystery Dungeon akatevedzana. Etrian Odyssey Nexus, zita rekupedzisira mufranchise, rakatanga kuburitswa muna 2018, saka harina kumbotora nguva yakareba kubva… Verenga zvakawanda
January 7 2022 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
2022 zvakare inoratidza digitization yekubhejera kure muFrance, asiwo kwese kwese pasirese. Sezvinobvumwa, kune miganho yekuwana pane mamwe marudzi emitambo zvinoenderana nemitemo inoiswa munyika imwe neimwe, asi izvi hazvinonotse kutorwa kwemusika kwemakambani akabatana ne… Verenga zvakawanda
Kufona Kwebasa: Vanguard Dev inoratidzira shanduko dziri kuuya kumutambo.
January 5 2022 ndima JEAN-MICHEL CAPPIN
Vatambi vanogona kutarisira kukwidziridzwa kwechombo uye kudonha, pamwe nezvimwe zvakakosha zvinogadziridzwa munguva pfupi iri kutevera. Mushure mekutora zororo, vagadziri veCall of Duty: Vanguard vadzoka kubasa uye vatambi vanogona kutarisira kuti dzimwe shanduko dzakanaka dzichaitwa kumutambo. ... Verenga zvakawanda
HP inovhenekera nyowani Omen yemitambo desktops, iyo Victus 15L desktop
January 6 2022 January 5 2022 ndima Corinne Rancourt
HP yakafumura mutsara wayo wekupedzisira weOmen yemitambo desktops uye yakajairwa Victus desktop PC yevashandisi vese. Omen emitambo desktops anosanganisira itsva Omen 45L uye Omen 25L shongwe, ine zvichangoburwa zvikamu kubva kuIntel, AMD uye Nvidia. Ngatitarisei zvakanyanya kune itsva ... Verenga zvakawanda
peji1 peji2 ... peji24 → zvinotevera
Peji inotevera "